Raul Gonzalez oo dib u xasuustay goolkii uu ku aamusiyay taageerayaasha garoonka Camp Nou – Gool FM
Raul Gonzalez oo dib u xasuustay goolkii uu ku aamusiyay taageerayaasha garoonka Camp Nou
Dajiye October 13, 2019
(Madrid) 13 Okt 2019. Labaatan sanno ayaa laga joogaa xasuusta dabaaldegii caanka ahaa halyeeyga kooxda Real Madrid ee Raul Gonzalez, kaddib goolkii uu kaga dhaliyay Barcelona garoonka Camp Nou.
Bishii Oktoobar 13-keeda 1999-kii, Raul Gonzalez ayaa gool dhimasho ah ka dhaliyay Barcelona daqiiqaddii 85-aad ee dheesha, xilli Barca ay ciyaarta ku hogaamineysay 2-1, kahor inta aan goolkan la dhalinin.
Raul Gonzalez ayaa sameeyay dabaaldeg cajiib ah, isaga oo fartiisa saaray afka, taasoo uu kula jeeday inuu aamusiyo taageerayaashii kooxda Barcelona ee ku sugnaa garoonka Camp Nou, waxaana lagu tiriyaa inuu ka mid yahay dabaaldegyadii ugu caansanaa taariikhda ee kulamada El-clasico.
Haddaba Raul oo dib u xasuustay goolkan ayaa wuxuu yiri:
“Dabaaldegan waxaa keenay duruufo gaar ee xilligaas iyo ciyaarta ah, way cadahay in muuqaalka dabaaldega la duubay taariikh ahaan, laakiin xiriirka aan la lahaa ciyaartoyda Barcelona, taageerayaashooda iyo kooxda wuxuu ahaa mid ixtiraam weyn uu ka buuxo”.
“Si kastaba ha noqotee, waxaa jiray waxyaabo aniga igu kalifay inaan ku sameeyo garoonka dhexdiisa, xiisad ayaa jirtay, goolka wuxuu noqday wax laga soo tagay, waxaana uga tagayaa sheeko ahaan si looga sheekeeyo”.
Si kastaba ha noqotee, Raul Gonzalez ayaa ah gooldhaliyaha labaad kooxda Real Madrid ee ugu goolasha badan wuxuuna dhliyay 323 gool, waxaa kaliya kaga badan Cristiano Ronaldo, kaasoo dhaliyay 450 gool, muddo 9 sano uu ku qaatay garoonka Santiago Bernabeu.
Goolhayihii hore ee Real Madrid Iker Casillas oo ugu hambalyeeyay saaxiibkiis Ramos Rikoodhkii uu xalay sameeyay